Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Fitsidihana voafetra mankany Hawaii mandritra ny 2 volana fanampiny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fepetra fitsangatsanganana ao Hawaii
Io dia lasa mantra mahazatra avy amin'ny governoran'i Hawaii David Ige ho an'ireo mpizahatany izay mieritreritra ny ho tonga any amin'ireo nosy hanao vakansy - Azafady, ahemory ny drafitry ny dia.
Isaky ny Governoran'i Hawaii anio, ny fitsipiky ny dia dia hijanona mandritra ny roa volana farafahakeliny.
Hawaii dia miady amin'ny isa COVID-19 avo indrindra amin'ny tranga tranga sy fahafatesan'olona vaovao noho ireo karazana Delta tena mamindra.
Ho an'ireo izay mbola tonga any Hawaii dia tsy maintsy mampiseho porofo fanaovana vaksiny na valim-panadinana COVID ratsy izy ireo ao anatin'ny 72 ora aorian'ny fahatongavany any Hawaii na hiatrika quarantine 10 andro.
Ny Governora dia manao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety isan-kerinandro ao amin'ny Aloha State, ary nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay, ny fitalahoany dia nitovy - mangataka mpizahatany hiandry ny fitsidihany any Hawaii.
Izao dia izao Hawaii dia manana baiko maika hametra ny fomba fitantanana rehefa mankany Hawaii, ary isaky ny Governora anio, ireo fitsipika ireo dia hijanona mandritra ny roa volana farafahakeliny.
Hawaii dia niady tamin'ny isa COVID-19 avo indrindra amin'ny tranga tranga sy fahafatesan'olona vaovao, izany rehetra izany dia noho ireo karazana Delta tena mamindra. Tsy mahazatra ny mahita isa maty indroa ao anatin'ny iray andro. Ny tranom-paty any Honolulu dia tsy maintsy nametahana kaontenera 3 tao anaty vata fampangatsiahana ao anaty trano mba hitondrana ireo faty marobe voaray ary koa ireo izay nandalo avy any COVID, izay ny ankamaroany ankehitriny.
Nanazava ny governora Ige fa ny salan'isan'ny tranga vaovao isan'andro fito dia mbola ambony noho ny 300. Mampatahotra kokoa ny isa noho ny tamin'ny fotoana nisehoan'ny COVID-19 voalohany. Tamin'ny fotoana iray tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, dia efa ho 900 ny tranga vaovao voarakitra ao Hawaii tao anatin'ny iray andro.
Nanomboka teo dia nanjaka tamin'ny isan'ny olona afaka mivory amin'ny toerana iray i Hawaii ary koa hoe firy no mety hisakafo ao amin'ny orinasa iray amin'ny fotoana iray. Ho an'ny mpizahatany dia midika izany ny tsipika lava any amin'ny trano fisakafoanana, ary toerana maro izay manolotra sakafo no tsy mandray izany.
Ny lefitry ny lietnà ao Hawaii Josh Green, izay dokotera ER ihany koa, dia nijery ny tarehimarika voromahery tamin'ny mason'ny voromahery. Nasongadiny haingana fa ny ankamaroan'ireo izay naiditra hopitaly amin'izao fotoana izao amin'ny mararin'ny COVID dia ireo izay tsy voadinika. Mampiseho ny angon-drakitra fa manakaiky ny 90% amin'ireo mila fitsaboana any amin'ny hopitaly ho an'ny COVID dia tsy nahazo vaksiny, ary io isan-jato io dia mijanona tsy tapaka isan'andro isan'andro.
Amin'izao fotoana izao, ny fanaovana saron-tava dia tsy maintsy atao eny amin'ny habakabaka ampahibemaso, ary na hiditra amin'ny toeram-pivarotana sakafo aza, na hisakafo ao an-trano na haka fotsiny dia tsy maintsy mampiseho karatra fanaovana vaksiny vita.
Na eo aza ny zava-misy fa manakaiky ny tahan'ny fanaovana vaksiny 70% i Hawaii taloha mba hahatratrarana toe-tsaina andiany - 68% izao - tsy hitan'ny Governora intsony ny fiampitana io tokonam-baravarana io ho marika iray hamahana ny fameperana. Ny karazana Delta dia mampidi-doza tokoa ka mahatonga io tanjona manan-danja io ankehitriny tsy azo tsinontsinoavina.
Ny ahiahy lehibe indrindra dia ireo mpiasan'ny fahasalamana sy hopitaly izay nivelatra mihoatra ny fepetra mahazatra niditra tamin'ny taona faharoa. Ny mpiasa dia miasa mafy loatra ary ny isan'ny fandriana misy ho an'ny marary COVID dia tsy maintsy arahi-maso tsy tapaka mba hahafahan'ny hopitaly mandray hatrany ireo karazana marary mila fitsaboana.
Ho an'ireo izay mbola manapa-kevitra ny handeha ho any Hawaii dia tsy maintsy mampiseho porofo fanaovana vaksiny na valim-panadinana COVID ratsy ao anatin'ny 72 ora aorian'ny fahatongavanao any Hawaii na hametrahana quarantine 10 andro.
Rochelle Shankle hoy:
Oktobra 4, 2021 ao amin'ny 18: 34
"Toe-tsaina andiany" ha? Slipina Freudiana ve ity? Tongava mpamoaka lahatsoratra, afaka manao tsara kokoa isika.
Oktobra 4, 2021 ao amin'ny 06: 11
Mponina ao Hawaii aho ary raha ny fahalalako azy dia TSY mila mampiseho karatra vaksin na valim-panadinana ratsy ireo mpanjifa izay mandray ny baiko avy any amin'ny trano fisakafoanana fotsiny.
Tsy mihinana afa-tsy amin'ny sakafo any amin'ny vahiny izany.
Miasa amin'ny magazay fivarotana enta-mavesatra aho ary koa manatitra fivarotana enta-madinika sy sakafo an-tsitrapo.